Imibono engama-24 eshibhile yokonga imali - Imbotshana
Imibono engama-24 eshibhile yokonga imali
Masibhekane nakho - ukuthenga isembozo semifino esitolo segadi kungabiza, ikakhulukazi uma unendawo enkulu okumelwe uyihlanganise.
Noma kunini lapho ngikwazi khona, ngithanda ukugcina imisebenzi yami yengadi ibiza izindleko eziphansi ngangokunokwenzeka. Lapho kunemithombo emikhulu kakhulu yemibhede eshibhile, asikho isizathu sokuyithenga enkabeni yensimu.
Bheka eminye yale mibono ye-mulch, bese uphawula ngezansi uma unayo eyakho engingayifakanga ohlwini!
elula yesine yezipikili zikaJulayi
24. Ukusika utshani
Ukusikwa kotshani kungumthombo wakudala wesivalo semifino. Uma uwasebenzisa, qiniseka ukuthi ungawasabalalisi ngokweqile, ngoba angahle ashise ngenkathi ehla (enza inqwaba yomquba omncane). Basiza ukugcina ukhula phansi kahle.
23. Ukusikwa kotshani kukamakhelwane
Ukusikwa kotshani kukamakhelwane
Uma udinga ukondla indawo enkulu ikakhulukazi, ungahle uthande ukuzulazula endaweni ubheke izikhwama zotshani ezishiywe omakhelwane bakho. Okungcono futhi, cela omakhelwane abambalwa ukuthi babashiye endaweni yakho!
22. Umquba ongakaqedwa
Yize iningi lethu lomquba luthuthukisa inhlabathi yethu, uma unemvundiso eyengeziwe engakaqediwe ungayisabalalisa kuyo yonke imibhede yakho futhi izobuyisela ukhula emuva kahle. Imvamisa ngisebenzisa omunye umquba ku umgqomo wasendlini ongaphakathi .
21. Amabhokisi e-pizza angasetshenziswanga
Ngenkathi ngithemba ukuthi awenzi mkhuba wokudla ama-pizza amaningi njengoba isithombe esingenhla sikhombisa, amabhokisi e-pizza angaba yindlela enhle yokuthola amakhadibhodi 'amahhala'. Vele uqiniseke ukuthi awuzisebenzisi ezinamabala kawoyela.
20. Ama-chip chips wamahhala
Kungani uthenga ama-chips ezinkuni esikhungweni sengadi lapho ungawathola mahhala ezindaweni eziningi ezahlukahlukene? Nazi ezinye izinsiza ezinhle zezinkuni zamahhala zamahhala:
Izinsizakalo zomuthi wendawo
Izinkampani zikagesi - kufanele zigunde izihlahla zezintambo zikagesi
Izinkampani zocingo - zisika izihlahla kude nezintambo ngaso sonke isikhathi
19-15. Imikhiqizo yemfucuza evela kokulandelayo:
Iminyango yamapaki kufanele igcine la mapaki ehlanzekile, okusho ukuthi asusa isigaxa semifino esiningi esingaba khona!
Kunenqwaba yeminyango yedolobha eyahlukene enikezwe umsebenzi wokugcina nokuhlanza izindawo zomphakathi. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo ezimbalwa ezijwayelekile zezinkampani ezivame ukuba nenqwaba yemfucuza abangajabula ukuyinikeza. Nazi ezimbalwa nje:
Izinkampani ezisebenza ngokudla
Izinkampani zokucindezela uwoyela
Iminyango yokulungisa imigwaqo
Iminyango kadoti eqinile
Iminyango yamapaki wedolobha nezokungcebeleka
14. Ukuqothula izihlahla zikaKhisimusi
Isikhathi sikaKhisimusi yisikhathi esihle sokuqoqa isigaxa semifino esiningi samahhala. Esikhundleni sokuya kubaninikhaya ngabodwana, iya ezinkampanini ezinikela ngokugawula izihlahla mahhala ubone ukuthi zizokunikeza yini imfucuza yazo.
kungani kufanele ugqoke i-sunscreen
13, iphephandaba i-Shredded
Uma ungenayo i- umshini wephepha, uphuthelwa yinqwaba yemithombo yesivuno semifino kanye nomquba! Wonke umuntu osebenza engadini obucayi kufanele abe neyodwa emakhaya abo, njengoba enza i-junk mail namaphephandaba abe yinto ewusizo - kube kanye!
12. Iphephandaba elidala elimanzi
Ungamanzisa nephephandaba elidala ngaphandle kokuligawula, bese ulibeka embhedeni wakho. Yize izobola kunalokho isheshe, ingumbhede omuhle wokuvimbela.
11. Amabhali otshani
Amabhali otshani ayisikhwama semifino esimnandi uma ungazithola. Ngesikhathi sekwindla, amabhizinisi amaningi endawo azokhangisa esebenzisa amabhele endiza. Ngemuva kokuphela kwesizini yekwindla, bavame ukukunikeza mahhala uma ucela nje. Ungabuza futhi abagcini bezindawo, noma vele ulume inhlamvu bese uthengela amabhele ambalwa ashibhile.
10. Tshala imali ku-chipper shredder
Uma unegceke elikhulu ngokwanele, kufanele ucabangele ukutshala imali ku-chipper / shredder enhle yezinkuni . Le mishini yenza umsebenzi omfushane cishe wanoma iyiphi imfucumfucu yegceke, iguqula okungaba yimfucuza emsulwa ibe mahhala, kube lula ukuyenza ibe semboza ngomsele.
9. Ukushanela okuzinzile
Uma uhlala eduze nezitebele zamahhashi (noma unayo eyodwa), ungasebenzisa ukushanela njengomswakama wamahhala osebenza kahle. Vele uxhumane nomnikazi ozinzile - nginesiqiniseko sokuthi bangajabula kakhulu uma ungabenzela umsebenzi wamahhala.
8. Izinaliti zikaphayini
Uma uhlala endaweni enezihlahla zikaphayini, unenhlanhla - izinaliti zikaphayini ziningi futhi ziyimichilo emnandi.
7. Izikhwama zamaphepha eziphukile
Izikhwama zamaphepha eziphukile
Iningi lezitolo zokulungiswa kwekhaya noma izitolo zokudla lineqembu lezikhwama eziphukile noma imfucumfucu yegrosari abangajabula ukuthi ususe ezandleni zabo. Lolu hlobo lwe-mulch lusebenza njengephephandaba elimanzi, noma lihlala liqinile kakhulu.
umsebenzi omuhle kusuka ezingutsheni zasekhaya
6. Amaqabunga ekwindla
Abalimi abaningi bazophonsa amaqabunga ezinqwabeni zabo zomquba, kepha kufanele ucabangele nokuwasebenzisa njengendlela eshibhile ngempela yokufaka ingadi yakho ngokushesha. Nikezela ezinye zalezo zinqwaba ezinkulu ekuhlanganiseni!
5. Izinkampani zokubeka indawo
Yakha ubudlelwano nenkampani yokwakha indawo, okungcono umshayeli weloli. Bacele ukuthi bashiye imfucumfucu yabo engadini endaweni yakho ngemuva komsebenzi. Ngokushesha uzoba nesembozo esanele sokukugcina okungenani isizini ephelele.
4. Amathambo amadala enhlanzi
Umfundi oyedwa we-Cottage, Home and Gardening ubike ukuthi basebenzisa amathambo ezinhlanzi kuwo womabili ama-mulch futhi bavundise inhlabathi yabo. Leli thiphu lingesinye seziqinisayo impela, futhi lingenza ngibuze ukuthi badla izinhlanzi ezingakanani!
3. Izinsizakalo zezihlahla zasendaweni
Ngokufana nezinkampani zokulungisa izindawo, izinsizakalo zemithi zisebhizinisini lokusika nokwephula izinto eziphilayo. Futhi bavame ukujabula ngokweqile ukuba nendawo ethile yokuyilahla, ngakho xhumana nabo futhi wakhe ubudlelwano bezinkuni zamahhala zezinkuni nezihlahla zezihlahla.
2. Amashidi amakhadibhodi
Uma ungumuntu oyindunankulu wase-Amazon onjengami, mhlawumbe unenqwaba yamabhokisi amakhadibhodi asetshenziswa kabusha. Zidilize uzisakaze njenge-mulch engadini. Amakhadibhodi ahlala isikhathi eside kakhulu kunezikhwama zephephandaba noma zamaphepha!
Ngingazenza kanjani izinwele zami zikhule
1. Zenzele utshani
Ngilondoloze isikhathi esiningi - kepha ebanda kunazo - isisombululo sokugcina: ukuzenzela owakho utshani! Ungakwenza lokhu ngokutshala amabele akhula ngokushesha bese uwayeka nje ukuthi akhule futhi afe, bese uwanciphisa wonke bese u-voila! Unotshani bokumboza.
Ingabe unayo ithiphu ye-mulch eshibhile engiyithandayo? Ngicela ungazise kumazwana abekiwe!
Iziketi eziyi-45 Zentwasahlobo-Ehlobo, Ama-top kanye Nezesekeli (Ngaphansi kwe- $ 100!)
Okumnyama nokumhlophe kanye neChic Konke
Yini i-Furry? I-Movie Entsha ikuthatha Ungaphakathi Komhlaba Wabo
Abangu-19 Abangcono Kakhulu Bageza Abahleli Bobuhle Bafunge Ngu
yiminyaka emithathu igebe elikhulu leminyaka
i-aha bha ejwayelekile ikhasi ngaphambi nangemva
ingabe amanzi asiza ubuhlungu besisu
amadlingozi amahle kakhulu wama-2000
isisu esibandayo ngaphambi nangemva